क्षतिपूर्ति - Karnalipatra
कर्णालीपत्र संवाददाता ११ भाद्र २०७६, बुधबार १४:०२
डाक्टरलाई छक्याएर रु. १०००।– हत्याउने सुरले एकपटक वीरमान केन्द्रमा आयो । नियमानुसार रु. ५००।– तिर्यो । डाक्टरले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उसले भन्यो, “मेरो जीव्रोले स्वाद नै पाउँदैन ।”
डाक्टरको निर्देशनमा सहयोगीले एक बिर्को गुलियो दबाई खुवाए । उसले स्वाद पाइनँ भन्यो । क्रमशः तीतो, टर्रो र अमिलो दवाई एक÷एक बिक्रो खुवाउँदा समेत उसले स्वाद पाउँदै पाइन भनिरह्यो । र, रु. १०००।– क्षतिपूर्तिस्वरूप दिन जिकिर पनि गरिरह्यो ।
डाक्टरले उसको बठ्याइँ बुझिहाले । र, बिमार निको नभए क्षतिपूर्ति दिने आश्वासन दिँदै भने, “अन्तिम पटकको दवाई एक खुराक पियाउन दिनुस् । निको नभए आफ्नो रकम लिएर जानुहोला ।”
वीरमान खुशी भयो र चाँडो दबाई दिन कर गर्न थाल्यो । डाक्टरको निर्देशनमा सहयोगीले दबाईको बोतल नै ल्याएर वीरमानको मुखमा खन्याइदियो । ऊ पीरोले पीडित भएर हा हा… र हु हु.. गर्दै उठेर दगुर्यो ।
वीरमान गइसकेपछि जाँचेको त त्यो अकबरे खोर्सानीको झोलवाला दबाई पो रहेछ ।
११ भाद्र २०७६, बुधबार १४:०२
– परशु श्रेष्ठ छामछाम, छुमछुम गर्दै एउटा बूढो मानिस मेरो अघिल्तिर आइपुग्यो । उमेर त्यस्तै पचास या पचपन्न हुनुपर्छ । उसको हातमा एउटा लौरो थियो, जो उसको एकमात्र बाटो पहिल्याउने सहारा थियोे । उसका दुबै आँखा टालिएका थिए । काँधमा एउटा थोत्रो उनी धागोको बुनुवा झोला भिरिराखेको थियो । “कता […]
१२ भाद्र २०७६, बिहीबार ०९:५१
जनक शिक्षाले ल्यायो साहित्यिक बालपत्रिका
१८ बैशाख २०७७, बिहीबार ११:३९
३२ जेष्ठ २०७७, आईतवार १५:१५
भारतीय अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतले गरे आत्महत्या
११ भाद्र २०७६, बुधबार १३:५४
सात बजेपछि मान्छे छिर्न नदिने अनौठो तिल गाउँ !
१७ बैशाख २०७७, बुधबार १२:२९